Yiqiniso ezokuziKhethela - lawa amathuba angeziwe
Yiqiniso ezokuziKhethela - lokhu ezengeziwe ukuqeqeshwa sessions abalithandayo. "Khetha" (isiNgisi kobuholi.) - likhethwa, uyathanda noma awuthandi. Uhlu lezi zifundo abafundi noma abafundi ekuqaleni konyaka. Bona umphelelisi okuqukethwe isiyalo, okuyinto kubhekwa iphrofayli sesikoleni noma ekolishi, futhi enzelwe ukuvuselela futhi ngezifiso inqubo kumiswa. Ngokuvamile, lezi zigaba unikeze ngaphezulu ngokujulile ulwazi ezingeke lithathwe Uhlelo ejwayelekile.
Course ezokuziKhethela has imisebenzi eminingana. Okokuqala, uma kwenzeka abaqukethwe ngokujulile ulwazi kwezihloko core, esikoleni, lapho kwenziwa, it is ezikhethekile. Okwesibili, uma inkambo kuhloswe ngazo ukuqinisa nokuthuthukisa uhlelo eziyisisekelo imfundo, umfundi waqeqeshwa ezengeziwe. Lokhu umnikeza ukuzethemba futhi kuthuthukisa ukuncintisana kubuyisele EGU futhi ukubhalisa ekolishi. Okwesithathu, uma umfundi noma umfundi uthola ngokujulile ulwazi ohlangothini oluthile, kodwa ufuna ukuthuthukisa nezinye isiyalo lezindikimba ezingasiza kule. Ngokwesibonelo, lapho umfundi Ukulifunda ngijule wezibalo, kodwa ngesikhathi esifanayo ufuna ukuba ufunde ukubhala ngephutha, izifundo kobuholi ku isiRashiya uyoyinika lelo thuba. Ngokuvamile abafundi ukukhetha izilimi, ikhompyutha isayensi, izibalo, i-physics.
amakilasi zalolu isiRashiya unike amandla umfundi noma umfundi ukuhlola omunye izigaba, isibonelo, isitayela. Bavumela ngokuningiliziwe ezingaphezu kuka kukharikhulamu esikoleni, ijwayelekile eyala eziningi philological. Phakathi kwabo kungenzeka umlando ulimi, yezilimi dialectology.
Yiqiniso ezokuziKhethela ku stylistics ulimi Russian uyakwazi ukuthuthukisa amakhono okuxhumana abafundi, ukuthuthukisa inkulumo yabo, ukunikeza ulwazi izitayela sokusebenza. Akuphoqelekile ukuqeqeshwa sessions uvumele othisha njalo aveza Imininingwane ephelele ngalesi sici ulimi futhi isisekelo zabo ukuba zihlakulele e abafundi nabafundi ezihlukahlukene amakhono inkulumo.
Ingxenye esemqoka i-course ithatha ingxenye echaza eyayivame, ibhizinisi esemthethweni, besayensi nobunye zokwaluka isiRashiya. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, ulwazi mayelana izici eziyinhloko ngamunye wabo, imininingwane ngezindlela zazo nezibonelo. Ngaphandle kwalolu lwazi oluyisisekelo ulwazi mayelana nolimi kanye nemithetho yawo abafundi kuyobe akuphelele.
Njengengxenye yokuqokwa amakilasi abafundi abafundi bazokwazi ukuze sandise ukuqonda kwabo izincwadi Russian ngokuhlola izakhi isitayela yakha isitayela umbhali eliyingqayizivele sika isethulo. Esifundweni imisebenzi ebhaliwe, abafundi uyofunda, isibonelo, ukuthi indlela enjalo, nokuthi epithets, ukuqhathanisa, ihaba kanye nezinye izingxenye ezifanayo esasetshenziswa ekudaleni zinendlela yazo umbhali. Phela, amakhono usebenzisa esebenzisa kwezobuciko imiva izuzwe ukubonakaliswa ubuntu siqu embhalweni.
Yiqiniso ezokuziKhethela kungaba kubuye kusize abafundi ukuthatha isinqumo nge-umsebenzi wabo esikhathini sangemva kwalokho. Phela, hhayi kuphela luhlanganisa sitayela nolwazi oluyisisekelo lokuthi lolu limi, kodwa izingxenye yokuthi lokhu sekwandile kolimi kanye nezinye izigaba futhi eyala. target ezokuziKhethela abafundi ukukhetha imfundo eyengeziwe ngesikhathi ekuqondeni okwakushiwo futhi amathemba imisebenzi esizayo.
Kahle uhlela ihora zezemfundo
Pedagogical uthisha ukuba nesu
Usuku Lokuvuselela Abantu Balkar: Umlando Nemikhuba
Kuyini simila pancreatic
Inxanxathela "Leovit Lose Weight ngeviki.": Ukubuyekeza, Ukucaciswa, Izimo
Igazi HCV-ukuhlaziywa: ukuthi kusho futhi lapho ezinqunyiwe?
I izinhlumba isibindi esiyingozi, ukuthi kanjani lesi sifo
Astoria Park Hotel 4 * (Spain / Costa Brava): izithombe kanye nokubuyekeza